Nhau - LOFT EYEWEAR SHOW
LOFT Eyewear Shows ndiyo yekutanga yakazvimirira yakasarudzika eyewear zviitiko zvinoitwa gore rega rega muNew York City, Las Vegas uye ikozvino San Francisco. Kubva 2000, iyo LOFT zviitiko zvakaratidza zvakanyanyisa kusarudzika uye kucheka kumucheto vagadziri vanobva kutenderera pasirese.
Isu tiri boka revamwe-vane pfungwa, vanozvimirira vanogadzira vanogovana shungu dzekugadzira rinotaridzika rinotaridzika, dzimwe nguva rinonakidza, dzimwe nguva maziso ekare emutengi anonzwisisa. Tinotenda kuti mafuremu edu anofanirwa kuvezwa uye akaiswa nevatengesi vezvemaziso vakazvimiririra vanove nyanzvi dzekushongedza maziso edu kune ekuraira uye zvido zvemeso zvemushandisi wekupedzisira.
Maitiro edu akasiyana ekugadzira anongosimbisa chiono chedu chakajairika kusimudzira dhizaini yemaziso asiwo, zvakanyanya kukosha, kunakidzwa. Yedu yakazvimirira kuunganidzwa inotangira kuUS, France, UK, Italy, Denmark, Germany, Austria neSwitzerland.
Nzvimbo yekuungana yakafanana nevanofarira maziso ekushongedza maziso. Zvikwereti zvakatangira kubva kuKirk & Kirk, Anne Et Valentin, Blake Kuwahara, Munyu uyezve zvimwe zvinokutendera kuti ushandise masikati pasi peimwe denga uchiona mabhurandi akati wandei uye uchipinda muhuropi kuvimba kwemazano uye zviitiko. Iwe unogona kunyange kutora zororo kutora mumaonero kubva padenga remba uye kufuridzira usati warova iyo showa floor.
Iyo Loft ipfungwa inonakidza inoroora akanakisa vatengesi vezvitoro nemhando dzakazvimirira. Iyo nharaunda inokurudzira kubatana uye kugona mukati memunharaunda yakasarudzika yemaziso. Ini ndinogara ndakatarisira kuona iwo matsva dhizaini kubva kune aya akasarudzika uye matsva ekugadzira
Iyo Loft inzvimbo yakanaka… vese vekumusoro vatengesi munzvimbo imwechete, yakanaka mhepo uye iwe unoona vese vezera rako munzvimbo imwechete. Iwe unogona kugara nekudya kwemasikati uye kubata pamwe nevane shungu vekushandira pamwe kubva munyika ... manzwiro epedyo echokwadi.
"… Kwandiri zvinoita sezvine musoro kuongorora imwe nzira kune wese munhu"